कसरी हुन्छ वर्गको उन्मुलन ? « Naya Page
कसरी हुन्छ वर्गको उन्मुलन ?
प्रकाशित मिति : 1 May, 2019 10:40 am
लेनिनले भनेका छन्, ‘समाजवादको अर्थ हो वर्गहरुको उन्मुलन । जब वर्गहरु बिलाउने छन् । तब अधिनायकत्वको आवश्यकता रहदैंन । बिना सर्वहारा अधिनायकत्व वर्गहरु बिलाउन सक्दैनन् ।’ लेनिनको संकलित रचना भाग ६ को पृष्ठ ११२ मा उल्लेखित भनाई र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौ अनुच्छेदको अन्तिम लाईनमा प्रयुक्त ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्टङ निर्माण गर्ने’ भन्ने शव्दावली बीचको अन्तर सम्बन्धलाई केलाउन कुनै समस्या छैन ।
सम्पत्ति माथीको स्वामित्व र आर्थिक असमानताले नै वर्ग जन्माउँदछ । समाज हुने खाने र हुँदा खाने वर्गमा विभाजित छ । श्रमको शोषणले समानताको खाडल झन् झन् फराकिलो बनाएको छ । कोही हात मुख जोड्न नसक्ने कोही पैसा खर्च गरेर नसक्ने अबस्थामा छन् ।
हाम्रो एउटै समाज भित्र, एउटै सामाजिक समुह भित्रै एउटै जाती भित्र, एउटै क्षेत्रीय समुह भित्र वर्गिय खाडल फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली समाजमा वर्गिय शोषण तिब्र छ ।
६१ दशमलव १२ प्रतिशत मजदुरहरु अहिलेपनि दुर्घटना बिमामा समेटिएको छैन । काम गर्दैगर्दा दुर्घटनामा परेर घाईते हुंदा, अंगभंग हुदां उपचार पाउने अवस्था छैन । दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा आश्रित परिवारले राहत पाउने अवस्था छैन । जोखिममा काम गर्न बाध्य छन् । ८८ दशमलव १४ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरुले श्रम कानुनमा व्यवस्था भएको चाड पर्व खर्च उपलव्ध गराउदैंनन् ।
घर बिदा, साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा, बिरामी बिदा नपाउने र उपदान सञ्चयकोष नपाउने श्रमिकहरुको संख्या बढी छन् । सम्पूर्ण श्रमशक्तिको ९० प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत असंगठित क्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था शुन्य अबस्थामा रहेका छन् । र शोषणको रुप झन् डरलाग्दो अबस्था छ ।
पूँजीवादी जुवाको तख्ता पल्टाउने मजदुरहरुको क्रान्तिकारी र गौरवमय ईतिहासको स्मरण गर्दै उत्पादक शक्ति श्रमजिवि वर्गको मुक्तिको सिद्धान्त समाजवादी दृष्टीकोणबाट दिक्षित टङेड युनियन निर्माण आजको आवश्यकता हो ।
हेनरी जर्जका अनुसार न्युन ज्याला क्रान्तिकारी मजदुरहरु उत्पादन गर्ने औजार हो । जसले संसारलाई खत्तम गरिदिन्छ । यदी हेनरीको भनाईलाई मान्ने हो भने न्युन ज्याला पनि नपाउने मजदुरहरु अधिक छन् । नेपाली श्रम बजार मजदुरहरुमाथि शोषणमा आर्धारित छन् ।
बिक्रम सम्बत् २००३ साल फागुन २० गते बिराटनगरको जुटमिलबाट सुरु भएको नेपालको टङेड युनियन आन्दोलन नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काग्रेस पार्टी भन्दा जेठो इतिहास छ । प्रकारान्तरले टङेड युनियनहरु दलको भातृ युनियनका रुपमा आश्रित हुनु दुर्भाग्य बन्यो ।
दलै पिच्छे फरक टङेड युनियनहरु भए । सत्तासिन पार्टीले मजदुरहरुका लागि सिन्को नभाचे पनि मजदुर विरोधी ऐन कानुन बनाएपनि भातृ टङेड युनियनले चुँसम्म नबोल्ने, प्रतिपक्षि दलका प्रतिपक्षि टङेड युनियनले पार्टीका एजेण्डामा सञ्चालित हुन प्रवृति हाम्रालागि दुर्भाग्य बन्यो । सत्ता शासकहरुको संगठन हो भर नपर, वर्ग र संगठनमा भर पर भन्ने कमरेड लेनिनको सिद्धान्त नेपालमा पूर्णतः असफल भयो ।
लेनिनले भनेको समाजवादको अर्थ वर्गहरुको उन्मुलन र नेपालको संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध जनाए जस्तै वर्गको उन्मुलनमुखि र समाजवाद लक्षित टङेड युनियन निर्माण जरुरी छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम वर्गहरुको उन्मुलन गर्दै समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने समाजवाद उन्मुख लक्षित गराउने दवाव सिर्जना गर्ने क्रान्तिकारी टङेड युनियनहरुको आवश्यक छ । १ सय ३० औं मे दिवसको सार्थकता यसैमा केन्द्रीत छ ।
(राई जिफन्ट राष्टिङय कमिटी सदस्य तथा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष हुन्)
काठमाडौं, २२ जेठ । लगातारको लकडाउनका कारण सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेपछि सरकारले यसलाई खुकुलो बनाउने